Smartfile: Whitelabel Nnukwu Ngwọta Njikwa Gị | Martech Zone
Ma ị na-amalite azụmahịa ọhụrụ, ma ọ bụ na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ, ajụjụ mbụ ị ga-ajụ bụ, “isnye bụ ahịa m / onye ahịa m”? Ọ dị mfe, nri? Tupu m ruo akụkụ nke anyị na-enweghị ike ịza ajụjụ ahụ n'ụzọ ziri ezi, ka m nye gị ọkwa amamikpe m abụọ: SmartFile (nke ahụ bụ anyị) bụ ụlọ ọrụ na-ekekọrịta faịlụ maka azụmahịa. Anyị na-enye azụmaahịa ụzọ echedoro nke ọma iji gosipụta ma nata faịlụ na-enweghị nsogbu.
Mgbe anyị malitere afọ 3 gara aga, anyị kwenyere na ndị ọkachamara IT ga-eme mkpọtụ iji ngwaahịa anyị. Anyị ga-eme ka ọrụ ha dịkwuo mfe site na itinye nchịkwa nke ndị ọrụ na faịlụ n'aka ndị ọrụ ha. Mgbe emefu ọtụtụ puku dollar, ọtụtụ awa na tradeshows, Adwords, na ọbụna oyi oku, anyị ghọtara na IT ọkachamara ndị ikpeazụ ìgwè nke ndị chọrọ ịgwa anyị talk ukwuu na-akwụ ụgwọ anyị ego. Ihe anyị na-agwa ha ka ha mee bụ iwepụ akụkụ ọzọ nke ọrụ ha, nke ka njọ, wepụ "njikwa" ha.
N’agbanyeghi ihe anyi ji eme, ndi mmadu ka binyere aka iji ngwa ahia anyi. Dị ka ha mere, anyị malitere ịghọta na ndị a abụghị ndị IT, kama ọ bụ ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa n'ime òtù ndị a; ndị ọkachamara n'ahịa na-adịkarị mkpa iziga faịlụ buru ibu na onye ọrụ ibe ma ọ bụ onye na-abụghị onye buru oke ibu ka email ghara ijikwa. Ma ndị ahịa a so na mmadụ abụọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ Fortune 500, ha maara mkpa ọ dị ịkọwa akụkụ ọ bụla nke azụmahịa ha, gụnyere sava FTP ha. E kwuwerị, ha bụ ndị ọkachamara n'ahịa! Ha achọghị ka ha gafee ihe niile na-acha uhie uhie (nsogbu) na ngalaba IT ha maka ịtọlite ​​ma jikwaa sava FTP ha. Ha nọ n'okpuru egbe ahụ, dị ka ọtụtụ ndị na-ere ahịa, ha chọrọ ngwọta ngwa ngwa iji gboo mkpa ha. Ya mere, ha mere ihe anyị niile na-eme mgbe anyị nwere nsogbu: pịnye mkpụrụ okwu ole na ole n'ime Search ka Google mezie ya. Obi dị anyị ụtọ maka anyị, anyị pụtara wee gwa ha na anyị ga-eme ka ndụ ha dịrịkwuo mfe.
Ya mere ajụjụ m na-enwetakarị bụ ihe na-eme ka anyị dị iche karịa Dropbox, Box ma ọ bụ Google Drive na gịnị kpatara ndị ahịa azụmaahịa ji ahọrọ anyị karịa ha? Aga m ebido na Dropbox na Google Drive. Ndị a bụ ngwaahịa dị mma, nke kachasị mma, ha bụ n'efu! Isi ihe dị iche iche dị n'etiti ha, na anyị, bụ ntinye aha na otutu ndi mmadu. Ihe ikpeazu Dropbox na Google Drive ga - eme ka ị gbanwee bụ ịgbanwe akara ngosi ha ma dochie ya na nke gị, obere ihe ga - enyere gị aka iji ngalaba nke aka gị (faịlụ.yourdomain.com). Ọ bụrụ n ’ị na-eche n’ ụdị ụlọ ọrụ gị dịka mụ onwe m, nke a anaghị arụ ọrụ. Nke abuo, a na-emepụta ngwaahịa ndị a maka otu onye ọrụ. Onye ọrụ ọ bụla ga-enwerịrị akaụntụ na ha, wee nwee ike ịkekọrịta folda. Gbalịa ịkọwa usoro a na "onye nkịtị"; ihe ikpeazu onye ahia gha acho iru oru.
Iji Box, ị ga-enweta ọtụtụ ọrụ, akuko, na ọbụna akara, nke na-enye gị ohere iji akara nke gị na atụmatụ agba gị; agbanyeghị, ha anaghị enye nhọrọ iji ngalaba nke gị.
Nnukwu mmachi na nke ọ bụla n’ime ndị na-enye ha bụ nha faịlụ. Nnukwu faịlụ ị nwere ike bulite bụ 2GB. Nke ahụ nwere ike ịdị ka nnukwu faịlụ, mana ezughị iji bulite vidiyo ma ọ bụ ngosi PowerPoint dị arọ. Iji SmartFile ị nwere ike bulite faịlụ nha ọ bụla site na ihe nchọgharị ọ bụla. Maka ihe nyocha ndị ọzọ, anyị na-enye nkwado FTP zuru oke.
Ya mere, ịlaghachi na onye bụ onye ahịa anyị na otu m si azụ ha ahịa? Anyị chọpụtara na ọ bụghị otu ụdị nwoke, afọ, azụmahịa, ma ọ bụ ngalaba, kama ụdị mmadụ. Ndị a na-arụ ọrụ n'ụwa a na-arụsi ọrụ ike ma jidere n'etiti inweta ya nke ọma na nke kachasị mkpa ịnweta ya n'oge. Na-abịa site n’azụmahịa enweghị m ike iche maka onye dabara na nkọwa ahụ karịa mụ onwe m. Onye maara?
Tags: file nyefennukwu faịlụnnyefe faịlụ buru ibusmartfile
John nwere ihe karịrị afọ 14 nke ngwanrọ ịntanetị na ahụmịhe onye ndu. Tupu ịmalite SmartFile, John bụ onye isi oche na onye nhazi nke Webexcellence, otu n'ime ụlọ ọrụ mmepe weebụ kachasị na Indianapolis. John sooro ụlọ ọrụ dịka Delco Remy, Angie's List na NCAA rụpụta ngwa weebụ bara ụba. Ọzọkwa ka ọ na-arụ ọrụ na Webexcellence, John rụrụ ọrụ dị mkpa na mmalite mmalite nke ExactTarget. Dika onye isi ala na onye nchoputa nke SmartFile, John isi ahịa, ire ahịa, na mmepe azụmahịa.
Apr 23, 2013 na 8: 28 AM
Ọ dị mma ma dịkwa mma iji “nyere” ndị ọrụ gị ike, mana ikike ahụ ga-etinye nchebe sitere na amụma iji gbochie data azụmaahịa dị oke egwu ka ọ ghara ịla n'iyi ma ọ bụ jiri aka ya kpochapụ n'ihi na echekwara data ahụ naanị na igwe ojii, n'èzí IT ma ọ nweghị onye na-akwado ndị ahụ faịlụ elu, ebe ọ bụla. IT bụghị ụjọ nke ọgwụgwụ-onye ọrụ ji na njikwa n'ihi na anyị nwere ụdị ụfọdụ nke "akara freak" mbipụta, ma n'ihi na anyị ahụwo, site na egwu, ezigbo-ụwa ahụmahụ ego nke nsogbu na otu "ọma-ezi" onye ọrụ na- “Nanị ihe ọmụma zuru oke iji dị ize ndụ” na-anwa ịrụrụ anyị ọrụ anyị.
Automate backups? Akwa. Gbanwee nkwado ndabere na mpụga nke nlekọta ọ bụla site n'aka ndị ọkachamara n'ezie? O nwere ike igbu onwe ya maka azụmahịa. Igwe ojii ahụ ga - eme “nke kachasị mma” iji nyere gị aka, n'ime oke uru. Ozugbo ọ na-aba uru na ha ịhapụ ka data gị gaa "poof" ọ ga-eme nke ahụ.